Iza isika - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd. Natsangana tamin'ny 2015, manolo-tena izahay hanome ny mpanjifa serivisy fanatanterahana China azo antoka sy mpiara-miasa amin'ny fandefasana eran'izao tontolo izao.
Izahay mpikambana ao amin'ny ekipa dia manana 10 taona fanatanterahana lamina & lozisialy vahaolana manokana ho an'ny Indostria, mpiasa miasa mafy 30 ary mpikambana ao amin'ny ekipa IT, manome serivisy fandefasana any amin'ny firenena 220 manerantany.
Sunson international Logistics dia manome vahaolana fanatanterahana lamina tokana, izay misy ny fitehirizana ao Shina, ny fahatanterahan'ny trano fitehirizana, ny dropshipping, ny pick & pack ary ny fandefasana eran'izao tontolo izao. efa nanompo karazana e
mpivarotra varotra, toa ny Ebay, Amazon, fivarotana, varotra Woo, varotra lehibe, faniriana, mpamorona vola be, mpanonta lalao sns.
Ny tanjonay dia ny hanampy mpivarotra maro kokoa handefa paosy avy any Sina amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao.